Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - Inona no vakina manaraka
Ny karazana fanaraha-maso izay tsy tafiditra ao amin'ity toko ity dia ny ethnography. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny foko ety anaty habaka nomerika, jereo ny Boellstorff et al. (2012) , ary ho an'ny bebe kokoa momba ny foko ety anaty habaka nomerika sy hita maso, jereo ny Lane (2016) .
Daty goavana (fizarana 2.2)
Tsy misy famaritana mazava momba ny "angona lehibe", fa ny famaritana maro dia toa mifantoka amin'ny "3 Vs": volombava, isan-karazany, ary haingam-pandeha (ohatra, Japec et al. (2015) ). Jereo ny De Mauro et al. (2015) ho famerenana famaritana ireo famaritana.
Ny fampidirana ny angon-drakitra momba ny fitantanana ny governemanta ao amin'ny sokajy fampahalalana goavana dia somary tsy mahazatra, na dia efa nanao izany aza ny hafa, anisan'izany Legewie (2015) , Connelly et al. (2016) , ary Einav and Levin (2014) . Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny lanjan'ny antontan-taratasim-panjakana momba ny fikarohana dia jereo ny Card et al. (2010) , Adminstrative Data Taskforce (2012) , ary Grusky, Smeeding, and Snipp (2015) .
Ho fijerena ny fikarohana ara-pitantanana ao amin'ny rafitra statistika governemanta, indrindra ny US Census Bureau, dia jereo Jarmin and O'Hara (2016) . Ho an'ny Wallgren and Wallgren (2007) fikarohana ara-panjakana ao amin'ny Statistics Sweden, dia jereo ny Wallgren and Wallgren (2007) .
Ao amin'ny toko, nampitahaiko fohifohy ny fandinihana nentim-paharazana toy ny General Social Survey (GSS) miaraka amin'ny loharanom-baovao sosialy toy ny Twitter. Ho an'ny fampitahana am-pitandremana sy fandinihan-tena amin'ny fanadihadiana nentim-paharazana sy ny angona sosialy, jereo Schober et al. (2016) .
Ireo toetra mampiavaka ny angona lehibe (fizarana 2.3)
Ireo toetra 10 ireo ny angona lehibe dia nofaritana tamin'ny fomba samihafa tamin'ny alalan'ny karazana mpanoratra maro samy hafa. Ny fanoratana izay nanova ny fomba fisainako momba ireo olana ireo dia ahitana an'i Lazer et al. (2009) , Groves (2011) , Howison, Wiggins, and Crowston (2011) , boyd and Crawford (2012) , SJ Taylor (2013) , Mayer-Schönberger and Cukier (2013) , Golder and Macy (2014) , Ruths and Pfeffer (2014) , Tufekci (2014) , Sampson and Small (2015) , K. Lewis (2015b) , Lazer (2015) , Horton and Tambe (2015) , Japec et al. (2015) , ary Goldstone and Lupyan (2016) .
Nandritra ity toko ity, nampiasa ny teny fanalahidy nomerika aho , izay heveriko fa tsy miandany loatra. Ny teny fanao malaza hafa ho an'ny marika nomerika dia dizitaly dizitaly (Golder and Macy 2014) , fa araka ny nanazavan'i Hal Abelson, Ken Ledeen, sy Harry Lewis (2008) , mety mety ny fametrahana fingerprints nomerika kokoa . Rehefa mamorona dian-tongotra ianao, dia fantatrao izay mitranga ary ny dian-tongotrao dia tsy azo ampiharina aminao manokana. Toy izany koa ny tsipika nomerika. Raha ny marina dia mamela fehin-dalana ianao amin'ny fotoana rehetra izay tsy dia mahalala firy. Ary, na dia tsy manana ny anaranao aza ireo tsiro ireo, dia matetika izy ireo no mety hiverina aminao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia toy ny fingerprints izy ireo: tsy hita maso sy mamaritra manokana.
Big (fizarana 2.3.1)
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny antony mahatonga ny fitsaboana M. Lin, Lucas, and Shmueli (2013) statistika dia jereo ny M. Lin, Lucas, and Shmueli (2013) ary McFarland and McFarland (2015) . Ireo olana ireo dia tokony hitarika ireo mpikaroka hifantoka amin'ny hevitry ny fampiharana, fa tsy ny dikan'ny statistika.
Raha mila fanampim-panazavana mikasika ny fomba nahazoan'i Raj Chetty sy ny mpiara-miasa amin'ny lisitra momba ny hetra, jereo Mervis (2014) .
Ny tahiry lehibe dia afaka mamorona koa ireo olana ara-pitsaboana izay tsy dia mahazatra loatra ny fahaiza-mampiasa ny solosaina tokana. Noho izany, ny mpikaroka manao fametahana amin'ny tahiry lehibe dia mamelatra ny asa amin'ny ordinatera maro, indraindray antsoina hoe programa parallèle . Ho fampidiran-danja amin'ny programa mifanolo-bodirindrina, indrindra ny fiteny iray antsoina hoe Hadoop, jereo ny Vo and Silvia (2016) .
Always-on (fizarana 2.3.2)
Rehefa mandinika mandrakariva ny angon-drakitra, dia zava-dehibe ny handinihina raha toa ianao mampitaha ny olona mitovy na tsia amin'ny vanim-potoana na raha mampitaha ny vondrona miovaova vitsivitsy ianao; Jereo ohatra, Diaz et al. (2016) .
Nonreactive (fizarana ¿sec: non-reactive? )
Boky malaza momba ny fepetra tsy mivoatra dia Webb et al. (1966) . Ny ohatra ao anatin'io boky io dia mamarana ny vanim-potoana nomerika, saingy mbola mirehitra hatrany izy ireo. Ho an'ny ohatra ny olona manova ny fitondran-tenany noho ny fanatrehana ny fanaraha-maso betsaka, jereo ny Penney (2016) sy Brayne (2014) .
Ny fihetsiketsehana dia mifandray akaiky amin'ny vokatry ny mpikaroka (Orne 1962; Zizzo 2010) sy ny vokatra Hawthorne (Adair 1984; Levitt and List 2011) .
Tsy feno (fizarana 2.3.4)
Raha mila fanazavana bebe kokoa, jereo Dunn (1946) sy Fellegi and Sunter (1969) (tantara) sy Larsen and Winkler (2014) (maoderina). Ny fomba fitoviana toy izany koa dia novolavolaina tao amin'ny sehatry ny solosaina tamin'ny anarana toy ny deduplication data, famantarana ny anarana, anarana mifandraika, fitadiavana dika mitovy, ary dika mitovy ny fisavana (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) . Misy ihany koa ny fomba fitehirizana manokana momba ny tsiambaratelo mba hitahirizana ny fifandraisana izay tsy mitaky ny fampitaovana vaovao (Schnell 2013) . Ny Facebook ihany koa dia namolavola dingana iray hampifandraisana ny firaketany amin'ny fifidianana fifidianana; Izany dia natao hanombanana ny fanandramana iray izay holazaiko aminareo ao amin'ny toko faha-4 (Bond et al. 2012; Jones et al. 2013) .
Raha te-hahalala bebe kokoa momba ny fanamafisana, dia jereo ny toko faha-3 amin'ny Shadish, Cook, and Campbell (2001) .
Tsy azo idirana (fizarana 2.3.5)
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny disadisa fikarohana AOL, dia jereo ny Ohm (2010) . Manolotra torohevitra momba ny fifaneraserana amin'ny orinasa sy ny governemanta ao amin'ny toko faha-4 aho rehefa mamaritra ny fanandramana. Mpanoratra maro no naneho ny ahiahiny momba ny fikarohana izay miankina amin'ny angon-drakitra tsy hita, jereo ny Huberman (2012) sy ny boyd and Crawford (2012) .
Raha ny fahazoana miditra amin'ny angona avy amin'ny governemanta, i Mervis (2014) miresaka momba ny fomba nahazoan'i Raj Chetty sy ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny firaketana an-tsoratra nampiasaina tamin'ny fikarohana nataon'izy ireo momba ny fitantanana ara-tsosialy.
Tsy misy solontena (sec: non-représentant)
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny tantaran'ny "representativeness", dia jereo ny Kruskal and Mosteller (1979a) , Kruskal and Mosteller (1979b) , Kruskal and Mosteller (1979c) , ary Kruskal and Mosteller (1980) .
Ny famintinana ny asan'ny Snow sy ny asan'ny Doll and Hill dia fohy. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny asan'ny koloana an'i Snow dia jereo ny Freedman (1991) . Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fianarana ny dokotera britanika dia jereo ny Doll et al. (2004) sy ny Keating (2014) .
Maro ireo mpikaroka no ho gaga raha fantatra fa na dia naka ny angona avy amin'ny dokotera vavy sy ny dokotera 35 taona aza ny Doll and Hill, dia tsy nampiasa an'io tahiry io izy ireo tamin'ny voalohany. Hoy izy ireo: "Satria tsy dia fahita firy ny homamiadan'ny havokavoka sy ny lehilahy eo ambanin'ny 35 taona, dia mety tsy ho hitan'ireo antokon'olona ireo mandritra ny taona vitsivitsy izany. Ao amin'io tatitra an-tsoratra io dia voafetra ny saintsika amin'ny lehilahy 35 taona eo ho eo. " Rothman, Gallacher, and Hatch (2013) , izay manana ny lohateny hoe provocative hoe:" Nahoana no tokony hialana ny fisoloana maha-olona "? mamorona fikirakirana tsy famelabelarana.
Ny tsy famoahana dia olana lehibe ho an'ny mpikaroka sy ny governemanta izay maniry ny hiteny momba ny vahoaka iray manontolo. Tsy dia mampanahy ny orinasa, izay mifantoka matetika amin'ny mpampiasa azy ireo. Raha te-hahalala bebe kokoa momba ny fomba fijerin'i Statistics Nederland momba ny olana tsy voatanisa amin'ny raharaham-barotra, dia jereo ny Buelens et al. (2014) .
Ho an'ny ohatra mpikaroka mampiseho ny ahiahiny momba ny natiora tsy misy solontenan'ny loharano lehibe dia jereo ny boyd and Crawford (2012) , K. Lewis (2015b) , ary Hargittai (2015) .
Ho fampitahana amin'ny antsipirihany kokoa ny tanjon'ny fanadihadiana ara-tsosialy sy ny fikarohana momba ny epidemiolojika, dia jereo ny Keiding and Louis (2016) .
Ho an'ny maro hafa momba ny ezak'izy ireo hampiasa Twitter amin'ny fanolorana fanalalahana momba ny mpifidy, indrindra ny tranga tamin'ny fifidianana alemà 2009, dia jereo ny Jungherr (2013) sy Jungherr (2015) . Taorian'ny asa nataon'i Tumasjan et al. (2010) mpikaroka manerana izao tontolo izao dia nampiasa fomba amam-pihetseham-po - toy ny fampiasana ny fanandramana amin'ny fihetseham-po mba hanavahana ireo fanamarihana tsara sy ratsy amin'ny antoko-mba hanatsarana ny fahaiza-manaon'ny data Twitter mba haminavina karazana fifidianana isan-karazany (Gayo-Avello 2013; Jungherr 2015, chap. 7.) . Toy izao no namintinan'i Huberty (2015) ny valin'ny fanandramana natao haminavinana ny fifidianana:
"Tsy nahomby ny fomba fampahalalana fanta-daza mifototra amin'ny fampahalalam-baovao sosialy raha toa ka manaiky ny fangatahana ny fandrosoana amin'ny hoavy. Ireo tsy fahombiazana ireo dia miseho noho ny toetra manan-danja amin'ny media sosialy, fa tsy amin'ny fahasarotana metodolojika na algorithmika. Raha fintinina, ny fampahalalam-baovao sosialy dia tsy, ary mety tsy hisy mihitsy mihitsy, hanolotra sarivongana azo itokisana, tsy misy ifandraisany, ary solontenan'ny electorate; ary ny fahamatoran'ny fampahalalam-baovao sosialy dia tsy ampy ny data mba hamahana ireo olana ireo. "
Ao amin'ny toko faha-3, hamaritra ny fametrahana sy ny fanombanana amin'ny antsipiriany bebe kokoa aho. Na dia tsy misy famoahana ireo angona aza, dia mety ho lanjany ny sandany amin'ny fepetra tsara, raha misy fepetra tsara.
Drifting (fizarana ¿sec: drifting? )
Sarotra be ny mijery ny fandehan-javatra avy any ivelany. Na izany aza, ny tetikasa MovieLens (resahina ao amin'ny toko faha-4) dia efa notontosaina nandritra ny 15 taona mahery nataon'ny vondrona mpikaroka momba ny akademika. Noho izany, afaka nanangona sy nizara vaovao momba ny fomba nipoitra ny rafitra tamin'ny vanim-potoana izy ireo ary ahoana no mety hisy fiantraikany amin'ny fanadihadiana (Harper and Konstan 2015) .
Manam-pahaizana maromaro no nifantoka tamin'ny fisintonan'ny Twitter: Liu, Kliman-Silver, and Mislove (2014) sy Tufekci (2014) .
Ny fomba iray hiatrehana ny fihanaky ny mponina dia ny mamorona tontolon'ny mpampiasa, izay ahafahan'ny mpikaroka hianatra ireo olona ireo amin'ny fotoana iray, jereo ny Diaz et al. (2016) .
Ny algorithmika dia mangaihay (fizarana ¿sec: algodimika-miongotra? )
Voalohany aho dia naheno ny teny hoe "algorithmically confounded" nampiasain'i Jon Kleinberg tao anaty lahateny iray, saingy indrisy fa tsy tsaroako hoe oviana na taiza ny lahateny nomena. Ny fotoana voalohany nahitako ilay fehezan-tsoratra dia tao Anderson et al. (2015) , izay fifanakalozan-kevitra mahaliana momba ny fomba ampiasain'ireo algorithm ampiasain'ny habaka mampiaraka dia mety hanasarotra ny fampiasan'ny mpikaroka hampiasa ny angon-drakitra avy amin'ireny tranonkala ireny mba hianarana ireo fepetra ara-tsosialy. Izany fiahiahiana izany dia natsangan'i K. Lewis (2015a) ho valin'ny Anderson et al. (2014) .
Ankoatra ny Facebook, Twitter ihany koa dia manoro hevitra ny olona hisakanana ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanakatonana fahatarana; jereo ny Su, Sharma, and Goel (2016) . Noho izany, ny ambaratongan'ny fanakatonana fahatelo ao amin'ny Twitter dia fitambarana tandindona ataon'ny olombelona amin'ny fanakatonana tratry ny taona sy ny firosoana amin'ny algorithmika hampiroboroboana ny fanakatonana telo.
Ho an'ny fampahalalam-baovao-indrindra indrindra ny hevitra fa ny teoria sosialy sasany dia "matanjaka tsy kamera" (izany hoe manamboatra an'izao tontolo izao fa tsy mamaritra azy io fotsiny) -see Mackenzie (2008) .
Salama (fizarana 2.3.9)
Ireo sampan-draharahan'ny statistika dia miantso ny fanitsiana ny fanitsiana ny antontam-baovao momba ny statistika . De Waal, Puts, and Daas (2014) manoritsoritra ireo tetikady fanitsiana statistika novolavolaina ho an'ny angona fanadihadiana ary handinihana ny habetsaky ny fampiharana azy ireo amin'ny loharanom-baovao lehibe, ary Puts, Daas, and Waal (2015) manolotra sombin-kevitra mitovy ho an'ny mpihaino marobe.
Ho an'ny birao sosialy, jereo ny Ferrara et al. (2016) . Ho an'ny ohatra sasantsasany amin'ny fanadihadiana mifantoka amin'ny fitadiavana spam ao amin'ny Twitter, jereo ny Clark et al. (2016) sy Chu et al. (2012) . Farany, Subrahmanian et al. (2016) manoritsoritra ny vokatry ny DARPA Twitter Bot Challenge, fiaraha-miasa marobe natao hampitahana ny fomba fitadiavana botsaka ao amin'ny Twitter.
Saina (fizarana 2.3.10)
Ohm (2015) mijery fanadihadiana vao haingana mikasika ny hevitra momba ny vaovao mafonja ary manome tolotra maromaro. Ireo antony efatra izay atolony dia ny halehiben'ny fahavoazana, ny mety hitera-doza, ny fisian'ny fifandraisana amin'ny tsiambaratelo, ary ny fisian'ny loza mety hitranga amin'ny olana lehibe.
Ny fikarohana fianarana momba ny fiarakaretsaka tao New York dia niorina tamin'ny fandalinana nataon'ny Camerer et al. (1997) izay nampiasa karazana taratasy samihafa telo samihafa. Ity fandalinana vao haingana ity dia nahatsikaritra fa mpamily no lasibatra ireo mpamily: tsy dia niasa loatra izy ireo tamin'ny andro izay nivoahan'ny karamany.
Tao amin'ny asa taty aoriana dia nanadihady bebe kokoa ny sivana amin'ny aterineto ao Shina (King, Pan, and Roberts 2014, [@king_how_2016] ) King sy ny mpiara-miasa. Ho an'ny fomba fijery mifandraika amin'ny famerana ny sivana an-tserasera ao Shina, jereo ny Bamman, O'Connor, and Smith (2012) . Ho an'ny maro hafa momba ny fomba fitantanana statistika toy ny iray nampiasain'ny King, Pan, and Roberts (2013) mba handinihana ny fihetseham-pon'ireo lahatsoratra 11 tapitrisa, jereo Hopkins and King (2010) . Ho fanampim-panazavana bebe kokoa momba ny fianarana voamarina dia jereo ny James et al. (2013) (tsy dia teknika) sy Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) (teknika fanampiny).
Fandinihana sy famoahana (fizarana 2.4.2)
Ny fizarana dia ampahany betsaka amin'ny siansa momba ny angona indostrialy (Mayer-Schönberger and Cukier 2013; Provost and Fawcett 2013) . Ny karazana fandrobana izay matetika ataon'ny mpikaroka ara-tsosialy dia ny fampahafantarana demografika; Jereo, ohatra, Raftery et al. (2012) .
Ny Google Flu Trends dia tsy tetikasa voalohany hampiasa ny angon-drakitra momba ny taham-pahavitrihana ankehitriny. Raha ny marina, ireo mpikaroka any Etazonia (Polgreen et al. 2008; Ginsberg et al. 2009) sy Suède (Hulth, Rydevik, and Linde 2009) dia nahita fa ny teny fikarohana sasany (ohatra "gripa") dia naminavina ny fanaraha-maso ny fahasalamam-bahoaka tahiry alohan'ny namoahana azy. Taorian'izany, maro ireo tetikasa maro hafa nanandrana nampiasa ny angon-drakitra nomerika ho an'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny aretina; jereo Althouse et al. (2015) ho an'ny famerenana.
Ankoatra ny fampiasana angon-drakitra nomerika mba haminavinana ny vokatra ara-pahasalamana, dia nisy ihany koa ny asa goavana nampiasa ny angona Twitter mba hampahafantarana ny vokatry ny fifidianana; Ho an'ny fanadihadiana dia jereo Gayo-Avello (2011) , Gayo-Avello (2013) , Jungherr (2015) (toko 7), ary Huberty (2015) . Ny fandefasana endriky ny fampiasam-bola ara-toekarena, toy ny vokatra avy any ivelany (GDP), dia mahazatra ihany koa any amin'ny banky foibe, jereo Bańbura et al. (2013) . Ny tabilao 2.8 dia ahitana ohatra vitsivitsy ahitana fianarana izay mampiasa karazana dingana dizitaly mba haminavinana karazana hetsika iray manerantany.
Tabilao 2.8: Fandalinana izay mampiasa loharanom-baovaon-tsarimihetsika lehibe mba hanaporofoana ny zava-mitranga sasany
Twitter Birao fandatsaham-bokin'ny horonan-tsary any Etazonia Asur and Huberman (2010)
Hikaroka logs Fandefasana sarimihetsika, mozika, boky, ary lalao video any Etazonia Goel et al. (2010)
Twitter Dow Jones Industrial Average (tsenam-bola Amerikana) Bollen, Mao, and Zeng (2011)
Sosialy media sy tranonkala fikarohana Fandinihana ny fihetseham-po sy ny tsenan'ny mpampiasa vola any Etazonia, Royaume-Uni, Canada, ary Shina Mao et al. (2015)
Hikaroka logs Ny fihenan'ny alikaola ao Singapore sy Bangkok Althouse, Ng, and Cummings (2011)
Farany, Jon Kleinberg sy ireo mpiara-miasa (2015) dia nanipika fa ny olana eo amin'ny famolavolana dia latsaka ao anatin'ny sokajy roa samy hafa, ary ireo mpahay siansa sosialy dia nirotsaka nifantoka tamin'ny iray ary tsy niraharaha ny iray hafa. Alaivo sary an-tsaina ny mpanao politika iray, hiantso an'i Anna aho, izay miatrika haintany ary tsy maintsy manapa-kevitra raha hanamboatra shaman iray hanao dihy misotro toaka mba hampitombo ny orana amin'ny orana. Mpanao politika hafa, hiantso azy ho Betty aho, dia tsy maintsy manapa-kevitra raha hitondra elo amin'ny asa mba tsy hialàna amin'ny làlana mankany an-trano. Samy afaka mandray fanapahan-kevitra tsara i Anna sy Betty raha toa ka takatr'izy ireo ny toetrandro, saingy mila mahafantatra zavatra samihafa izy ireo. Tokony ho takatr'i Anna raha ny orana amin'ny orana dia miteraka orana. Betty kosa, etsy ankilan'izany, tsy mila mahatakatra na inona na inona momba ny antony; Izy ihany no mila porofo mazava. Ireo mpikaroka ara-tsosialy dia matetika mifantoka amin'ireo olana toy ny an'i Anna izay i Kleinberg sy ireo mpiara-miasa dia miantso ny olana ara-politika "rain-dihy" toy ny hoe misy fanontaniana momba ny antony. Ireo fanontaniana toy ny iray izay niatrehan'i Betty-izay i Kleinberg sy ireo mpiara-dia dia miantso ny olana ara-politikan'ny "paradisa" - dia mety ho zava-dehibe ihany koa, saingy nahazo lanja be loatra avy amin'ireo mpikaroka ara-tsosialy.
Famaritana momba ny fanandramana (fizarana 2.4.3)
Ny gazetim-paritra PS Political Science dia manana ny sariohatra momba ny angona lehibe, ny fampiharana ara-boajanahary, ary ny teolojika, ary Clark and Golder (2015) mamintina ny anjara biriky tsirairay. Ny Diary momba ny Akademia Nasionaly momba ny siansa any Etazonia dia naneho ny fitohizan'ny fampitandremana sy ny angona lehibe, ary ny Shiffrin (2016) mamintina ny fandraisana anjara tsirairay. Ho an'ny fanabeazana momba ny fiasa izay manandrana mitady fomba fijery avy amin'ny natiora ao anaty loharanom-baovao lehibe, dia jereo ny Jensen et al. (2008) , Sharma, Hofman, and Watts (2015) , ary Sharma, Hofman, and Watts (2016) .
Raha ny momba ny fanandramana voajanahary, Dunning (2012) dia manome fitsaboana fampidirana, boky lava miaraka amin'ny ohatra maro. Ho an'ny fisainana manoloana ny fanandramana voajanahary dia jereo ny Rosenzweig and Wolpin (2000) (toe-karena) na Sekhon and Titiunik (2012) (siansa politika). Deaton (2010) sy Heckman and Urzúa (2010) miady hevitra fa ny fifantohana amin'ny fanandramana voajanahary dia mety hitarika ireo mpikaroka hifantoka amin'ny fanombanana ny vokatra miteraka tsy dia lehibe; Imbens (2010) manamarina ireo hevitra ireo amin'ny fomba fijery tsara kokoa momba ny lanjan'ny fanandramana voajanahary.
Rehefa nanoritsoritra ny mety hahatonga ny mpikaroka iray tsy hanombana ny fiantraikany amin'ny fanatanterahana ny vokatra dia nanoritsoritra teknika iray antsoina hoe variables manan-danja aho . Imbens and Rubin (2015) , ao amin'ny toko faha-23 sy faha-24, dia manome fampidirana ary mampiasa ny lottery ho ohatra. Ny fiantraikan'ny asa fanompoana miaramila amin'ny mpikoko dia antsoina indraindray ny vokatra mahomby (CAcE) ary indraindray ny valin'ny fitsaboana eo an-toerana (LATE). Sovey and Green (2011) , Angrist and Krueger (2001) , ary Bollen (2012) manolotra fanadihadihana momba ny fampiasana ireo fari-pahaizan'ny fitaovana ara-politika, ekonomika ary sosialy, ary i Sovey and Green (2011) dia manome ny lisitry ny "mpamaky" fanombantombanana ny fandalinana ampiasaina amin'ny vondrona manan-danja.
Toa hita fa tsy tamin'ny taom-pivarotana loka 1970 no, raha ny marina dia narahina tsara; Nisy fiovana madinidinika avy amin'ny tsy fetezana vetivety (Fienberg 1971) . Berinsky and Chatfield (2015) mihevitra fa tsy dia manan-danja loatra io fiviliana madinika io ary mifanakalo hevitra momba ny maha-zava-dehibe ny fanarahan-dàlana araka ny tokony ho izy.
Raha mikasika ny mifanandrify, jereo ny Stuart (2010) ho an'ny famerenana mijery tsara, ary Sekhon (2009) ho an'ny famerenana fanandramana. Raha mila fanampim-panazavana bebe kokoa ianao dia jereo ny Ho et al. (2007) . Ny fitadiavana lalao iray tonga lafatra ho an'ny olona tsirairay dia sarotra matetika, ary mampisy fahasarotana maro izany. Voalohany, rehefa tsy misy ny lalao marina dia mila manapa-kevitra ny amin'ny fomba fandrefesana ny elanelana eo amin'ny roa tonta ny mpikaroka ary raha toa ka lavitra loatra ny elanelany. Ny fahasarotam-pahefana faharoa dia mitranga raha maniry ny hampiasa baolina maro isaky ny tranga ny mpikaroka ao amin'ny vondron'ny fitsaboana, satria izany dia mety hitarika tombontsoa kokoa. Ireo olana roa ireo, ary koa ny hafa, dia voafaritra amin'ny antsipiriany ao amin'ny toko 18 ao Imbens and Rubin (2015) . Jereo koa ny ampahany faharoa amin'ny ( ??? ) .
Jereo ny Dehejia and Wahba (1999) ho an'ny ohatra iray izay ahafahan-tsika mifanaraka amin'ny fanandramana mifanaraka amin'ny fanandramana mifandraika. Saingy, jereo Arceneaux, Gerber, and Green (2006) sy Arceneaux, Gerber, and Green (2010) ho an'ny ohatra izay tsy nahatonga ireo fomba fitsaboana tsy mamerina fepetra fanandramana.
Rosenbaum (2015) sy Hernán and Robins (2016) manolotra torohevitra hafa momba ny fijerena fampitahana tena ilaina ao anaty loharano lehibe.